officer - Synonyms of officer | Antonyms of officer | Definition of officer | Example of officer | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for officer
Top 30 analogous words or synonyms for officer
ဇိုဇမ်၊ (ကာတွန်း) အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ တားဆီး ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်း(PSI)တွင် Communication Officer ရာထူးဖြင့် ဒီဇိုင်နာ တစ်ပိုင်း Officer တစ်ပိုင်းအလုပ်ရသွားသည်။
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့ Managing Director /Chief Technical Officer,
ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (NAUTICAL ADVISER AND PRINCIPAL OFFICER, MERCHANT DEPARTMENT)
စစ်ဦးစီးမှူး(ပထမတန်း) စစ်ဦးစီးမှူး(ပထမတန်း) ဆိုသည်မှာ (General Staff Officer One) ဂျီဝမ်းဖြစ်ပြီး စစ်ဆင်ရေး၊ထောက်လှမ်းရေး၊လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိကြီးဖြစ်သည်။
ဉာဏ်ထွန်း၊ ဦး ကိုလည်းကောင်း Rhode Isiand ပြည်နယ် Newport မြို့ရှိ Naval Education and Training Center (NETC) တွင် International Officer Candidate Couse ကို
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The first bomb disposal officer to defuse an unexploded V1 flying bomb was John Pilkington Hudson in 1944.
စန်းယု၊ ဦး (နိုင်ငံတော်သမ္မတ) ဦးစန်းယုသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် အမှတ် ၃ ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း၌ ဒုတိယဗိုလ်အဆင့်ဖြင့် တပ်စုမှူးအဖြစ် တပ်မတော်တာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင်သည်။ Junior Officer Course (J. O. C) နှင့် U E O S Course No.4တက်ရောက်ပြီးနောက် ဖျာပုံခရိုင်တွင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်၍ နှိမ်နင်းရေး တာဝန်ယူရသည်။
လယ်ရီ အယ်လစ်ဆင် လောရင့် ဂျိုးဇက် လယ်ရီ အယ်လစ်ဆင်ကို ၁၉၄၄ ဩဂတ် ၁၇ နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်သော အယ်လစ်ဆင်သည် ဆော့(ဖ်)ဝဲ အဓိကထုတ်လုပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတခုဖြစ်သော Oracle Corporation ကို အခြားလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ Chief Executive Officer အဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၂၇ ဘီလီယံပိုင် ဆိုင်ပြီး ၂၀၁၀ တွင် ကမ္ဘာ႔အဆင့် ၆ ရှိ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
လယ်ရီ အယ်လစ်ဆင် Ellison သည် Hurd နှင့် မကြာခဏ တင်းနစ် ကစားလေ့ရှိပြီး Ellison ၏ ရင်းနှီးသောသူငယ်ချင်းလဲ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ၆ တွင် Mark Hurd ကို Oracle ၏ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် Chief Excuetive Officer Safra A. Catz. Ellison နှင့်အတူ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အယ်လစ်ဆင်သည် Salesforce.com, NetSuite, Quark Biotechnology Inc နှင့် SuperGen တို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီး မြုပ်နှံငွေများ ထည့်ဝင်ခဲ့သည်။